Shorkie - Nduzi zuru ezu maka Shih Tzu Yorkie Mix - Reeddịrị
Shorkie - Nduzi zuru ezu maka Shih Tzu Yorkie Mix
Enweela mgbe ọ bụla ịchọrọ Rottweiler, mana, nha bụ nsogbu? Ọfọn, nkịta Shorkie bụ ihe ọzọ dị mma. Nwa osisi a nwere ume enwetaghị ihe edeturu na a na-ekenye ya n'ezie dị ka obere obere. A nnukwu agwa na obere ahụ.
Nwatakịrị a feisty abụghị nkịta dị ọcha, kama ọ bụ ngwakọ mmebe nke sitere na ịlụ Shih Tzu na Yorkshire Terrier; dị ka Morkie .
Onye na-eme mkpọtụ, onye isi ike, na onye na-eguzosi ike n'ihe siri ike, Shorkie kachasị mma maka naanị ndị okenye ma ọ bụ ndị nwere ụmụaka toro eto nwere ahụmahụ.
Nwa nkịta a ga-ebu ihe n’agbata kilogram ise ruo iri na abụọ, ọ ga-eguzo n’agbata 9-11 ruo ogologo, ma dịrị ndụ n’agbata afọ 11-16.
Ka anyị lelee onye nchebe a siri ike na obere nkọwa.
Reeddị Bdị Ihe egwuregwu
Nzube Lap Dog / Ibe
Adabara Okenye naanị ụlọ
Nha 5 ruo 9 ”
Ibu ibu 5 ruo 11 pound (nwoke) ma ọ bụ 4 ruo 8 pound (nwanyị)
Afọ ndụ Afọ iri na otu ruo iri na isii
Agba dị iche iche Black na Tan, Agba aja na ọcha, ọla edo, uhie ma ọ bụ ọla edo, Oji na ọcha
Iwe Iguzosi ike n'ihe, Ike, Feisty, Na-eche nche ma
Omume kwa ụbọchị Ọkara - Otu ije ije nkeji iri atọ rue iri isii kwa ụbọchị
Arụ Ọrụ Level Agafeghị oke
Nri Nri Kwa .bọchị N’agbata calorie 200 na 320 kwa ụbọchị maka nkịta zuru oke tozuru etozu na 300 - 550 maka ọnwa 18 mbụ
Okwu Ahụike Ndị A Maara Ọrịa ụgbọ elu Brachycephalic, ọrịa eze, Glaucoma, Hypoglycaemia, Lens luxation, Patella luxation and Portosystemic shunt
Kedu ihe bụ Shorkie? Nchịkọta izu
Ahụhụ Shorkie na Àgwà
Etu esi elekọta Shih Tzu Yorkie
Nri na nri choro
Ọdịdị Shorkie: Uwe, Agba, na Udo
Nke a toy-sized Rottweiler bụ siri ike, obi ike, na anya. Ha bụ ndị na-eche nche; na-eme ka ị mara ihe ọ bụla nwere ike ịbụ ebe ọdịghị. Ndị a ndị nchebe na-eguzosi ike n'ihe nwee ịnụ ọkụ n'obi na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ịgbọ ụja.
Shorkie abụghị nkịta dị ọcha. Ọ bụ ngwakọ ngwakọ, emere site na ịzụlite Shih Tzu na Yorkshire Terrier .
Mmebe crossbreeds bụ n'ezie na ịrị elu; ebe a anyị nwere ngwakọta nke nkịta 9th kachasị ewu ewu na US, Yorkshire Terrier na 20th nkịta kachasị ewu ewu, Shih Tzu - na-eme Shih Tzu Yorkie mix.
Eziokwu na-akpali mmasị:
The Yorkshire Terrier bụ a na-ewu ewu ìgwè ịgafe na nke a mere na Maltese izu Morkie.
Shorkie bu ụzọ bido dịka onye otu na ebe nne na nna na-emefu ntakịrị, ha na-egosiwanye ewu ewu.
Dika ha bu ngwakọ, ndi ulo ulo ndi anabataghi ha ugbu a kama ha bu ndi edeputara akwukwo ndi ozo.
Ego Ole Ka Shorkie Na-efu?
Ndị a mara mma bọọlụ nke efu bụ n'ozuzu na obere litters, nkezi nke 1-5 puppy na dị ka ha bụ a ngwakọ, ahịa nwere ike ịbụ site $ 300- $ 1000.
N'ihi na anyị na-aghọta ihe banyere ndị a mara mma pooches, ka anyị nwere anya na ndị mụrụ ha.
Ndị a 'Nkịta ọdụm' bụ ndị eze China. Echere na nkịta a sitere na ịgwakọta Lhasa Apso na Pekingese nkịta. Shih Tzus bụ ndị ndị eze ukwu kpuchiri ma nọrọ ụbọchị ha dị ka ndị na-eme mkpọtụ (yabụ lapdogs).
A maara ha maka iguzosi ike n'ihe nye ndị nwe ha, na-agbaso ha dị ka ndò ha. Ha echefubeghị akụkọ ntolite ha; a na-akọwakarị ha dị ka ndị na-apụ apụ, na-adị njikere, na-ewepụkwa isi ike. Njikere ha na-eme ka ha na-eche nche dị egwu, yabụ ndị nwe ha kwesịrị ịtụ anya ọtụtụ ogbugbo .
Ha bụ nkịta ndị na-eme mkpọtụ, ndị ruru eru n'ọtụtụ ụlọ; n'ihi mmalite lapdog ha, ha nwere obi ụtọ na ụlọ na ụlọ, ọ dịghị achọ ohere buru ibu.
A na-akpọ ụdị ìgwè a dị ka Brachycephalic reeddị , nke putara na ha nwere udiri okpokoro okpukpu ma di obosara.
Ya mere Shih Tzus nwere ike ibute nsogbu iku ume. Anyị ga-elele nke a anya n'ụzọ zuru ezu ma e mesịa n'isiokwu ahụ.
Ya mere, anyị nwere nne na nna mụrụ anya, onye siri ike na onye isi ike ebe a, ka anyị lelee nke ọzọ!
Terrier a bidoro na nchịkwa pesti, a zụrụ ya ka ọ pere mpe iji kpochapụ oke site na mines na Scotland na Northern England n'etiti 1800s.
Na 1886 na Bekee Kennel Club ghọtara Yorkshire Terrier dị ka ụdị dị iche iche; site na nnabata ọhụụ, n'oge na-adịghị anya ha ghọrọ ndị enyi ịhọrọ maka ụmụ nwanyị bekee.
Terror nke mbụ hụrụ ụzọ ya si mmiri banye US na 1870s na American Kennel Club debara aha ha na 1885.
A hụrụ ndị Yorkies n'anya n'ihi mkpebi siri ike ha. Dị ka Shih Tzu; ha na-agbasi obi ike, na-ekwesi olu ike, na-enwekwa obi ike. N'ezie obere nkịta nwere ibu karịa agwa ndụ.
Ha maara ihe masịrị ha na ihe ha na-eme ọ kachasị mma maka ụlọ naanị ndị okenye; a ezigbo enyi onye ga-emekwa ka ị na mkpịsị ụkwụ gị.
Ya mere nne na nna ọzọ feisty nwere isi ike site na bọket ibu; ka anyị hụ ihe ga-eme ma anyị gwakọta ha abụọ.
Y’oburu n’acho onye uko nke onwe, obi siri ike, ma nwee obi ike, ihe a Shih Tzu Yorkie bu nkita diri gi .
Ha nwere iguzosi ike n'ihe nye ezinụlọ ha nke pụtara na ha na-amụ anya ma na-eche nche mgbe niile. Ike ha na ịnụ ọkụ n'obi ha pụtara na ha ga-eji obi ụtọ rịgoro ugwu ma ọ bụrụ na anyị ekwu eziokwu, ha efunahụla mmalite nke lapdog nke ndị mụrụ ha.
Ha nwere obi uto maka ogbugbo, nke nwere ike ịbụ nsogbu nye ụfọdụ ndị nwe ha. Ha ga-eme ka ị mara ihe ọ bụla na-ekwesịghị ekwesị.
Stubdị isi ike ha na-eme ka o sie ike ịzụ ha (gụọ ngalaba ọzụzụ anyị n'okpuru).
Ọ bụ ezie na ha na ndị ọzọ na-emekọ ihe, ha na-enwekarị ntụkwasị obi n’ebe ndị bịara abịa nọ. Ha anaghịkwa achọsi ike na enweghị ike ịkọ ụmụaka na-eto eto ka ha wee dabara adaba naanị n'ụlọ ndị okenye.
Iguzosi ike n'ihe ha na-enweghị atụ pụtara na ha nọnyeere gị mgbe niile; dị mwute ikwu na, nke a pụtara na ha mfe-ata ahụhụ site na nkewa nchegbu. Ndị nwe ha na-akọwakarị Shorkies dị ka ndị “rapara” na “ndị nọ ná mkpa.” N'ihi nke ahụ, ha ekwesịghị ịhapụ naanị ha ruo ogologo oge.
N'abụghị ụdị kachasị mfe ilekọta, ka anyị lee anya na nkọwa zuru ezu iji hụ ma ọ bụrụ ndị lapdogs ndị a na-eguzosi ike n'ihe dabara n'ụzọ ndụ gị.
Ezi mkwado na ụgwọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke a isi ike ngwakọ. A na-agbanwe agbanwe na-eme omume na mmalite mmekọrịta oge dị mkpa na nwa nkịta gị na mmepe.
Puppy faili ntanetịime kwesịrị kwesịrị-ekewa n'ime nri 4 kwa ụbọchị; Ppmụ nkịta Shorkie adịghị iche. Ozugbo ha dị ọnwa isii ma ọ bụ karịa, nke a na-agbadata na nri 2 kwa ụbọchị maka ndụ ha niile.
Obere udiri anumanu, ihe na-erughị 20lbs n'ozuzu ha na-eji ruo Kalori 40 kwa paụnd nke ibu ahu kwa ubochi.
Ọ bụrụ na Shorkie na-atụle na 9lbs, na-atụ anya inye ya calorie 360 ​​kwa ụbọchị .
Mara ya nke oma iwu ịkọ nri ụlọ na ụkpụrụ iji hụ na ị na-eri nri nkịta dị elu - nke a nwere ike ịbụ nkụ, mmiri, akpịrị ịkpọ nkụ, ma ọ bụ nke ndu.
Ga-amara na ọ bụ ezigbo mma nri mgbe ọ na-ezute kwa ụbọchị ekwukwa n'akwụkwọ chọrọ gị pooch.
Otu nwoke Shorkie ga-eri ihe dị ka calorie 360 ​​kwa ụbọchị na nwanyị ga-enwe calorie 240.
Eburu amuma ibu n'ihi na a nwoke shortkie nkịta nso n'etiti 5-12lbs mgbe n'ụzọ zuru ezu matured na 4 ka 8 pound maka nwanyị.
Dị ka ha bụ ngwakọ ọ gaghị ekwe omume ịmara nke ọma. Nha nne na nna ha ga-enye gị ezigbo ihe ngosi nke etu nwa gị ga-ebu ibu.
A kọwara Shorkies dị ka ume ma na-arụ ọrụ. Ha ga-eji obi ụtọ na-aga ije ruo elekere 60 kwa ụbọchị. Ma cheta na ahịhịa ahụ siri ike - ha ga-enwe ọ equallyụ ịrapara na sofa gị n'apata ụkwụ gị, na-ajụ ịga ogige ahụ.
Ikwesiri ichoputa oge 30-60 nke mmega kwa ubochi maka umuaka ndia . N'agbanyeghị ọgụgụ isi ha dị elu, ha anaghị ahụkarị isi ihe na egwuregwu ụbụrụ. Nwee ụfọdụ ọgwụgwọ dị oke mkpa iji mee ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ụfọdụ.
Ahụike Ahụike: Sfọdụ Shorkies nwere ike ịkwụsị dị ka obere nne ha Shih Tzu nke na-eme ka ha nwekwuo nsogbu iku ume. Gbaa mbọ hụ na ị ghọtara ihe egwu dị na ya ọrịa brachycephalic airway syndrome , ọkachasị mgbe ị na-emega ahụ n’oge oyi.
Dị ka nne na nna Yorkie ha, Shorkies nwere ike isi ike ikweta . Nke a nwere ike ime ka ọzụzụ sie ike, ọkachasị ụlọ.
Anyị maara na mgbe ọ na-abịa ọzụzụ nkịta , ụzọ kachasị mma bụ mmesi obi ike na ụgwọ ọrụ dị mma. Mgbe nwa bebi ahụ na-eme ihe ịchọrọ, kwụghachi ya ụgwọ, ma ọ bụ ụgwọ ọrụ nri, onyinye egwuri egwu, ma ọ bụ otuto dị mfe.
Ọzụzụ Clicker bụ ngwa ọrụ amamiihe maka ịzụ nkịta dị isi ike. Onye pịrị apị bụ obere ngwaọrụ mgbe ị pịrị ya, ọ na-eme ụda “pịa” nke dara ụda.
Ebumnuche bụ ịpị mgbe ị hụrụ nkịta gị na-eme ihe ịchọrọ, wee kwụọ ya ụgwọ ngwa ngwa. Ọ na-arụ ọrụ na echiche nke nhazi oyi . Nkịta na-akpakọrịta pịa na ụgwọ ọrụ dị mma. Pịa ahụ gosipụtara omume achọrọ, yabụ nkịta na-amụta ijikọ omume na ụgwọ ọrụ.
Anyị maara na nkwụsị ụlọ nwere ike ịbụ nsogbu maka Shorkies ka ị hụ na ị nwere usoro a na-agbanwe agbanwe, hapụ ha ka ha risịrị nri ọ bụla, ihe mbụ n'ụtụtụ, nke ikpeazụ n'abalị, ma too ha mgbe ha 'apụla ite' n'èzí.
Shorkies nwere ike ghara ntụkwasị obi n'ihi na ha mụrụ anya ma na-echekwa ọdịdị.
Gbaa mbọ hụ na ịmalite mmekọrịta mmekọrịta site na nwata.
Agbanyeghi olile anya ituputa udiri nsogbu aru ike di na nkita di iche-iche, anyi maara na ufodu ndi Shorkies na enwe otu nsogbu ndi nne na nna ha Yorkie na Shih Tzus na eme. Ọ bụ nnọọ ogologo ndepụta, ọ dị mwute.
Ọrịa ụgbọ elu Brachycephalic - nke a bụ ebe ọdịiche dị n’ime usoro iku ume nke elu na-ebute nsogbu iku ume. A na-enwekarị nhọrọ ọgwụgwọ maka nkịta ndị na-eweta mgbochi ikuku, ma ka a na-azụkwu nkịta ndị nwere mkpụmkpụ mkpụmkpụ na nke skulls dị nkenke, ọnụ ọgụgụ nke ụdị brachycephalic na-arịwanye elu.
Ọrịa eze - Ọzọkwa ekele maka mkpụmkpụ nke mkpụmkpụ na nke dị warara, ụdị anụ ọhịa ndị a na-ebute oke nrịanrịa na ọrịa oge n'ihi ezé na-ete ibe ha ma wepụ enamel.
Glaucoma - Yorkshire Terriers nwere ogologo oge nke glaucoma. Ekwesịrị ime nnyocha anya na nne na nna ọ bụla nwere ike ịnwe nkịta ọ bụla na - egosi akara anya.
Hypoglycemia - Nke a bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ obere nkịta puppy na-enye ara. N'ihi glucose dị ala, ha na-eweta dị ka adịghị ike ma ọ nwere ike ịnwụ.
Lens Luxation - ihe ọzọ gbasara ahụike na anụ ọhịa dị egwu, nke a bụ ebe njikọ dị na anya na-agbada nke na-enye ohere ka oghere wepụ site na ọnọdụ ya. Nke a nwere ike bụrụ ihe kpatara glaucoma. Gerywa ahụ na-ekwekarị omume.
Mbupu nke Patella - Ihe a na-ahụkarị na obere nkịta, ebe a bụ ebe patella (ikpere ụkwụ) si na trochlear. Nke a nwere ike ibute ọrịa ogbu na nkwonkwo, na ngwụsị, na mgbu.
Ọkpụkpụ Portosystemic - O di nwute, ma Yorkie na Shih Tzu bu ndi nwere nkwekorita nke na egbochi ogwu mkpochapu nke gha eme n'ime imeju. A na-ewepụtazi ihe ndị nwere ike imebi n’ahụ mmadụ.
Dị ka nne na nna ha, uwe mkpuchi Shih Tzu Yorkie nwere ike ito ogologo. Nke a na-eme ka ha mara mma dị elu mmezi na ejiji n'ihu. Ihichapu kwa ụbọchị bụ ihe dị mkpa .
Shorkies ga - enwerịrị uwe ogologo dị ka nne na nna Yorkie ma ọ bụ uwe na - enweghị efe. Iji metụ ya aka na-adịkarị nro ma dị mma. Dika ha bu ngwakọ, Shorkies nwere ike bia na otutu agba tinyere Black na Tan, Brown na White, Gold, Red na Gold, Black & White.
Horkpụ ntutu Shorkie
Ọtụtụ ndị nwe ha ga-eme Shorkie ha oge niile (yabụ kwa izu asatọ) site na onye na-edozi nwoke n'ime ihe egwuregwu 'egwuregwu ụmụaka'. Nke a na-abụkarị ebe a na-eme ka ahụ dị mkpụmkpụ nke na-ebelata eriri na nkpuru, ma a na-edozi ihu na ọdịdị gburugburu; na-edebe ọmarịcha anya ya.
Gbaa mbọ hụ na ị na-ehicha anya na ntị ha oge niile, na-ewepụtakwa oge iji saa ezé ha.
Dika ndi nne na nna na-agbanye obere obere, Shorkies na-abụkarị nhọrọ kachasị mma maka nke a.
Ọ bụ akụkọ ifo na ha bụ 100% hypoallergenic - agbanyeghị, nkịta niile ga-efunahụ ntutu na dander. Ma, ọ bụrụ na ị na-edebe Shorkie gị mgbe niile, ọ na-adịkarịghị achọpụta.
Ogologo oge ole ka Shorkies na-adị ndụ?
Ogologo ndụ Shorkie dị n'etiti afọ 11 na 16!
Kedu ka nnukwu Shorkies si buru ibu?
Dị ka ha bụ ngwakọ, ọ na-esiri ike ịkọ kpọmkwem otú Shorkie ga-adị. Dị ka onye nduzi, ọ kwesịrị ịdị n'etiti 5-12 lbs ma guzoro n'agbata 5-9 sentimita n'ogologo!
Kedu ka ụmụ nkịta Shorkie si buru ibu?
Ga-atụ anya na Shorkie gị ga-etolite site na ọnwa 12. Ihe ngosi di nma banyere nkita nkita gi ga - eburu ibu bu ibu ha n ’izu asatọ wee baasa ya ato. Ya mere, ọ bụrụ na Shorkie gị dị 2.12lbs na 8 izu, mụbaa site na atọ, ha ga-adị gburugburu 6.36lbs mgbe etolitere.
Ego ole ka Shorkies na-eri?
Ikwesiri inye nri gi Shorkie 40 calorie kwa lb nke aru mgbe o toro. Maka onye toro eto toro 8 lbs, tụrụ anya na ị ga-eri nri calorie 320 kwa ụbọchị.
Bọọlụ ndị a mara mma nke fluff na-eme ndị enyi mara mma. Shortkie ga-agbaze obi gị; ha na-enwekarị uwe ogologo dị ka Yorkie, mana ha nwekwara ike inwe ntakịrị ife na ya.
Ha bụ ndị na-azụ ahịa na-atọ ụtọ, na-eche nche ma na-amụ anya.
A maghị ha maka ịzụ ọzụzụ ha, yabụ usoro na-agbanwe agbanwe na nkwado dị mma na ụgwọ ọrụ dị mkpa.
Ha echefubeghị nna nna ha lapdog, ya mere, mgbe 30-60 nkeji na-emega ahụ otu ụbọchị, ụmụ okorobịa a nwere obi ụtọ karịa ịgbanye na sofa.
Ikwesị ntụkwasị obi ha nke na-adịghị ada ada adịghị anabata ịbụ onye nanị ya hapụrụ, nke a na-akọwakarị dị ka onye rapara n'ahụ na mkpa.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere oge na ndidi iji soro bọọlụ ndị a mara mma na ị ga-eche ruo mgbe ebighi ebi ole ụdị mmadụ ga-adaba na obere ahụ!
Owned nwere Shorkie? Na-eche echiche ịnweta otu ụdị nkịta ndị a? Ka anyị mara n'okpuru!
Q: Shorkies na-awụfu?
A: Yorkie terriers na Shih Tzu mix nkịta dị iche iche anaghị atụfu ọtụtụ, nke mere ha nnukwu nkịta maka ndị nwere allergies.
Ajụjụ: Olee otu mmega ahụ Shorkie chọrọ?
A: Shorkies bụ obere nkịta dị ike nke chọrọ ọ dịkarịa ala minit 20 mmega ahụ kwa ụbọchị iji nwee obi ụtọ na ahụike. Jide n'aka na nkịta gị nwere mkpali nke ọma n'ihi na ha nwere ọgụgụ isi ma gwụ ha ngwa ngwa.
Q: Kedu ka ị si elekọta nwa nkịta Shorkie?
A: Na izu isii, ụmụ nkịta Shorkie na-arahụ site na mmiri ara nne ha na nri siri ike. Jide n'aka na ị na-eri nri nwa gị dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ ugboro abụọ kwa ụbọchị ruo mgbe ha tozuru oke.
Ajụjụ: Shorkies bụ nkịta dị elu?
A: ị ga-ehicha ntutu nkịta gị kwa ụbọchị iji mee ka ọ dị nro na ntanye. Ha abụghị mmezi dị elu; otu o sila dị, a ga-akpọrọ ha ndị na-edozi ụlọ oge ọ bụla wee belata mbọ ha ma hichapụ glands ha.
Ajụjụ: Shorkies enwere nsogbu ahụike?
A: ụdị nkịta a na-emepụta obere nsogbu ole na ole metụtara obere nkịta. Ọtụtụ nkịta nwere ọnọdụ ahụ ike nke a na-ahụkarị n'etiti ụdị ha, yabụ na nke a bụ ihe a na-apụghị izere ezere.
Ajụjụ: Shorkies enwere nkewa nchegbu?
A: Ee, ha na-eme! Ha ga-achọta ụzọ maka gị ịpịpịa ọnụ, susuo ọnụ, ma soro ha nọrọ dịka ha achọghị n'ezie ịnọrọ onwe ha ogologo. Ọ bụrụ na ịnọghị ọtụtụ awa kwa ụbọchị, ịnwere ike ịnweta anụ ụlọ ọzọ iji mee ka nwa nkịta gị nwee obi ụtọ mgbe ị na-anọghị.
Ajụjụ: Shorkies na-eme nkịta na-eche nche nke ọma?
A: Mba, ha anaghị. Dogsmụ nkịta nta a adịghị atụ egwu ma na-emenye ụjọ.
Q: Shorkies ọ dị mfe ịzụ?
A: may nwere ike ịchọrọ nwa nkịta Shorkie gị maka ọzụzụ oge dị ka ụdị ndụ ha nwere ike isi mee ka ha nwe obere ọzụzụ, ọ kachasị ndị nne na nna nkịta izizi.
Ajụjụ: Shorkies dị mma na ụmụaka?
A: Shorkies kachasị mma ka ha bụrụ nkịta ezinụlọ, ma ha dị oke egwu na obere ụmụaka. Ha nwere ike na-enwere ndị ezinụlọ ọhụrụ anyaụfụ, mana ha na-akwụsị ya ngwa ngwa!
Getmara Corgi Husky Mix (aka nke Horgi)
Ebumnuche 10 Maka Ihe Nkịta Na-ahapụ Ọkụ, Ndị Mmadụ, Ihu, etkwụ & Egbugbere Ọnụ
Australian mix dog dog lab mix
kedu ụdị nkịta bụ akwa
onye ọzụzụ atụrụ Ọstrelia gwakọtara ya na siberian husky
brindle pitbull lab mix ụmụ nkịta
ụlọ nyocha edo edo na ngwakọta collie